Langue (Mg) – Page 2 – Malag@sy Miray
2 avril, herintaona izay no nahalasa azy ho andron’ny zandary
2 avril 1969, andro manan-tantara eo amin’ny zandarimariam-pirenena. Andro tsiahivina satria tamin’io andro io, hono, no nanendrena an’i kolonely Richard Ratsimandrava hiadidy ny zandarimariam-pirenena ary izy no malagasy voalohany nahazo izany hoe « Commandant en chef » izany. Vao herintaona monja no nanombohana nanamarihana izany andro izany fa nandritry ny telo amby efapolo taona dia tsy nisy izany fanamaihana izany. Amin’ity taona ity izany dia afaka hametraka fanontaniana malalaka amin’ireo zandary ny vahoaka malagasy. Ny ahy dia tsotra ny fanontaniako. Ahoana ny fomba ahafahana manafoana ireny tsolotra sy kolikoly samihafa ataon’ny sasantsasany amin’ireo zandary? eny amin’ny lalam-pirenena ohatra, eny fitiliana ara-teknika ny fiarakodia na ny « visite technique » koa ohatra na koa…
Ka ‘lé problèm anie…
Ny fiaraha-monina eto andrenivohitra ankehitriny dia miaina ao anaty fahasarotana tanteraka. Loto, vaky trano, fahaverezana asa, sakatsakana ara-panjakàna, sns. Dia lasa heno amin’ny voambolan’ny olona tao anatin’ny taona vitsivitsy izay ny hoe « Ny problème ». Izay lazaina rehetra dia misy « problème », izay avoakan’ny vava dia ialohavan’ny teny hoe « ny olana anie » sns. Mikarakara taratasy eny amin’ny biraom-panjakàna ianao diatsy hita ny varavarana tokony hidirana hikarakarana izay taratasy ilaina, hita indray izany avy eo dia mila mifindra birao hafa fa mbola misy taratasy hafa ilaina mialohan’ny ahafahana mangataka io taratasy ilaina io, vita daholo izany rehetra izany dia mila miandry elaela fa tsy ao ny mpanao sonia : problème! Misy asa tokony…
Mamiko ny tenin-drazako
Fony aho vao nianatra niteny, dia ny malagasy no fitenin’i dada sy neny. Dia malagasy ihany koa no nianarana satria io aloha no nifandraisana. Nibadabada fony fahazaza ary nanomboka naheno fiteny hafa. Toa hafa saingy efa fandre satria ny naman’i dada sy neny dia niteny ireny fiteny ireny. Anglisy, frantsay nisy sinoa aza indraindray. Nony tany an-tsekoly, nohalalinina ny tenin-drazana, dia ny malagasy izany. Nianarana ny abidia, noezahina nofehezina ny firafitry ny teny, ary nofantarina ny hevitr’ireo voambolana tsy dia faheno mahazatra. Norantovina ihany koa ireo vanim-potoana nisy teo amin’ny tantara sy ny teny, ireo fotoana niverenana « nitady ny very » fa toa mbola tsy hita ihany izany hatramin’izao. Tsy mbola…
Raha tsorina dia mikorontana tanteraka Antananarivo, renivohitr’i Madagasikara. Hita taratra misongadina ny fahantrana sy ny loto. tsy mandeha amin’ny laoniny ny fifamoivoizana. Ny kaominina sy ny mpitandro filaminana dia hita miasa eny rehetra eny. Saingy eo amin’ny fotodrafitr’asa no tsy maharaka. Ny arabe dia feno lavaka ka ny tampitampina « bombô voanjo » aza amin’ny toerana maro tsy misy intsony. Mizotra miadana noho izany ireo fiara madinika, eny fa na dia ireo tsy mataho-dàlana hita fa efa mihamaro eto an-drenivohitra koa aza dia mitsitsy lavaka. ny taksibe tsy manaja ny fitsipiky ny fifamoivoizana Ny taxibe hatramin’izay ka hatramin’izao dia mbola tsy misy tena hoe manaja fifamoivoizana sy manaraka ny fitsipika mifehy ny…
Ho entina aiza ity firenena ity?
Nandalo ny 24 jolay 2013 ny malagasy. Tsy nisy ny fifidianana filoham-pirenena. Efa tsinjo lavitra izy io rehefa tsy nametra-pialàna ny Filohan’ny tetezamita 60 andro mialohan’io fotoana tokony handatsaham-bato io. Nisy ihany ireo kandidà no nametra-pialàna araka ny vaovao re fa toa tsy fantatra hoe nekena ve sa tsia izany fametraham-pialàna izany. Teo anelanelan’izay dia tadidy hoe nisy ireo saika hametraka ny antontan-taratasy no tsy noraisina satria tsy feno ireo taratasy nilaina ka tsy afaka nametraka izany taorian’ny alahady, fe-potoana farany ahafahana mametraka izany. Kinanjo fantatra avy eo fa nisy antontan-taratasy voapetraka ihany taorian’izany fe-potoana izany. Dia mbola eto isika amin’izao. FA HO ENTINA AIZA MARINA ITY FIRENENA ITY E?…
Arrêt sur clichés insolites